Caburin dheeraad ah oo lagu hayo Hong Kong
Tani waa faalo ka turjumeysa aragtida dowlada Mareykanka
Jamhuuriyadda Shacbiga ee Shiinaha waxa ay sii waddaa ololaheeda lagu baabi’inayo dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha ee Hong Kong, iyadoo kuwa u dooda dimoqraadiyadda ay silac kala kulmaan taageeradooda xorriyadda aasaasiga ah.
1-dii April, toddobo ka mid ah hoggaamiyeyaasha u ololeeya dimoqraadiyadda Hong Kong ayaa lagu xukumay ka qeybgalka isku imaatin aan fasax haysan oo ahaa mudaaharaad nabadeed kaasi oo la qabtay bishii August 2019-kii. Dadka la xukumay waxaa waxaa ka mid ah Martin Lee oo ah garyaqaan 82 jir ah, iyo Jimmy Lai oo ah maalqabeen warbaahineed.
Dibadbaxayaasha kale ee nabadda waxaa kamid ah Margaret Ng oo ahayd xildhibaan hore oo mucaarad ah iyo Lee Cheuk-yan, Leung-Kwok, Albert Ho, iyo Cyd Ho oo dhammaantood ah kuwa u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda.
8-dii April, kiis kale oo gooni ah, Jimmy Lai iyo Lee Cheuk-yan, iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqe Yeung Sam, ayaa qirtay dambiga ah inay ka qeybgaleen socod sharci-darro ah. "Waxaan qirtay dambiga, laakin wax qalad kuma aanan sameyn inaan xaqiijiyo xuquuqda dadka ee isu soo baxa nabadeed, waxaanna aaminsanahay in ay taariikhdu i xoreyn doonto," ayuu yiri Lee.
Mudaaharaadyadii waaweynaa ee sanadkii 2009 ka dhacay Hong Kong ayaa ku bilowday iyadoo lagu muujinayo diidmada sharci dhigaya in muwaadiniinta Hong Kong lagu maxkamadeyn karo gudaha Shiinaha. Bilihii la soo dhaafay, PRC (Jamhuuriyadda Shacbiga ee Shiinaha) waxa ay hirgelisay sharci adag oo dhanka ammaanka qaranka ah (NSL) iyo isbadallo aasaasi ah oo lagu sameeyay nidaamka doorashada ee Hong Kong kaasi oo si weyn u yareeyay tirada kuraasta sida tooska ah loo soo doorto ee sharci dejinta Hong Kong.
Intaa waxaa dheer, kumannaan mudaaharaadayaal ah iyo hoggaamiyeyaal badan oo caan ah oo taageera dimuqraadiyadda ayaa xarigooda loo cuskaday sharciga NSL iyo shuruuc kale.
Isagoo ka hadlaya xukunkii 1-dii April lagu riday toddobada qof ee u ololeeya dimoqraadiyadda Hong Kong, Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ned Price ayaa ku tilmaamay eedaha loo haysto “kuwo siyaasadaysan”, kuwaasi oo markale hoosta ka xarriiqaya ayuu yiri “heerka ay PRC iyo maamulka Hong Kong doonayaan in ay ku baabi’iyaan dhammaan noocyada kala duwan ee isu soo baxyada nabadeed ee magaalada.”
“Mareykanku waxa uu sii wadaa in uu cambaareeyo weerarrada sii soconaya ee PRC ee ka dhanka ah xorriyadaha aasaasiga ah iyo hay'adaha dimoqraadiga ah ee Hong Kong… Mareykanka waxa uu sii wadaa in uu taageero malaayiinta reer Hong Kong ee sida nabadda ah u muujiyay in ay ilaashadaan ismaamulka iyo xorriyadaha ay u ballan qaaday PRC.”
Isaga oo tilmaamaya cunnaqabateynta uu Mareykanku bishii March ku soo rogay saraakiisha Shiinaha ee wax u dhimaya xorriyadaha dimoqraadiyadda ee Hong Kong, Price wuxuu intaa ku daray, “waxaan sii wadeynaa inaan la xisaabtanno mas'uuliyiinta ku sugan Beijing, iyo kuwa Hong Kong ee doonaya in ay baabi'iyaan xorriyadaha aasaasiga ah iyo ismaamulka ay Hong Kong xaqqa u leedahay.”
Taasina waxa ay ahayd faallo ka tarjumeysa aragtida dowladda Mareykanka.